Kulammada Group A ee tartanka Euro 2020 oo caawa lasoo af-meeri doono… (Waa sidee rajada xulalka Wales, Switzerland & Turkey?) – Gool FM
(Rome) 20 Juun 2021. Waxaa lasoo gaaray kulammadii saddexaad ee wareegga guruubyada tartanka qarammada qaaradda Yurub kaasoo haatan si toos ah kaga soconaya 12 magaalo oo ku yaalla qaaradda Yurub.
Xulalka ku jira guruubka A ayaa caawa kala hari doona iyadoo xulka Taliyaaniga oo haatan leh lix dhibcood uu goor hore xaqiijiyay usoo bixitaanka wareegga bug-baxda ee tartankan.
Xulka Azzuri ayaa caawa la balansan dhiggiisa Wales kaasoo helay afar dhibcood labadii ciyaarood ee hore, waxaana xulka Wales uu u baahan yahay ugu yaraan inuu kulankan barbarro helo haddii uusan guul heli karin si uu u xaqiijiyo inuu soo gaaray wareegga 16-ka tartanka Euro 2020.
Sidoo kale Wales ayaa heysata fursad kale oo ay kusoo gudbi karto haddii xulka Switzerland uu dhibco lumiyo kulanka uu caawa la ciyaarayo xulka qaranka Turkey.
Xulka Wales ayaa heysta saf taam ah inkastoo ay jiraan xiddigo xoogaa fiicnaan la’aan dareemaya sida Aaron Ramsey iyo Joe Allen, balse inta kale waa u diyaar xulka uu kabtanka u yahay Gareth Bale.
Dhinaca kale, Kabtan Giorgio Chiellini ayaa ka maqnaanaya Taliyaaniga dhaawac awgiis, balse ciyaarta wareegga 16-ka ayaa la sheegay inuu taam buuxo u noqon doono.
Taliyaaniga ayaase caawa dib u heli doona Marco Verratti oo kulammadii hore dhaawac kaga maqnaa.
Xulka qaranka Switzerland ayaa heysta saf dhammeystiran mana jiraan dhaawacyo lasoo warinayo, dhinaca kale Goolhaye Yann Sommer oo Jarmalka u duulay Khamiistii si uu ugu tago xaaskiisa oo umushay ayaa maalintii xigtay tababarka kusoo laabtay, waana u taam ciyaarta caawa.
Turkiga waxaa caawa ma ka maqnaan doona xiddiga difaaca bidix ka ciyaara ee Umut Meras.
Rajada xul walba:
Italy: Xulka qaranka Taliyaaniga ayaa min 3-0 ku garaacay Turkey iyo Switzerland labadii ciyaarood ee ugu horreysay guruubkan, waxayna si toos ah u xaqiijiyeen inay ciyaari doonaan wareegga 16-ka tartanka Euro 2020, balse ma aysan xaqiijin inay kaalinta koowaad kusoo bexeen.
Wales: Wales waxaa ku filan barbarro si uu u xaqiijiyo kaalinta labaad inuu kaga dhammeystay guruubka A, balse haddii uu guul gaaro waxa uu geli doonaa booska koowaad. Haddii Wales lagu garaaco farqi goolal oo afar ama saddex ka yar xitaa wey soo bixi doonaan, ama iyagoo guuldarreystay ayay soo gudbi doonaan haddii Switzerland laga adkaado ama uu barbarro la galo Turkey.
Switzerland: Swiss-ka rajadiisa ku aaddan inuu kusoo baxo booska labaad ayaa aad u adag, waxaana uu u baahan yahay inuu garaaco Turkey isla markaasna Taliyaaniga uu farqi shan gool ama wax ka badan ku garaaco Wales, balse guul uu ka gaaro Turkey ayaa ka saacidi karta inuu helo fursad uu kaga horreyn karo xulalka booska saddexaad kaga dhammeystay guruubyada kale si wareegga bug-baxda uu u aado isagoo kaalinta saddexaad galay.
Turkey: Xulkan wax dhibic ah ma uusan helin labadii ciyaarood ee uu dheelay, waxaana u furan inuu caawa garaaco Switzerland si uu raadiyo fursad uu booska saddexaad ugu soo bixi karo.